कतै नहुने त होइन नेफ्टा अवार्ड ? - NewsPolar NewsPolar
कतै नहुने त होइन नेफ्टा अवार्ड ?
७ पुष २०७०, आईतवार ०८:०२
मलेसियामा सम्पन्न गरिने भनिएको नेफ्टा अवार्डको मिति स्थगित भएको छ । पहिले नेफ्टा अवार्डलाई कार्तिक २३ गते सम्पन्न गरिने जानकारी थियो । दोस्रो पटकको डिसेम्वर २५ अर्थात क्रिसमस डेका दिन मलेसियामा सम्पन्न हुने भनियो । तर त्यो डेटमा पनि नेफ्टा अवार्ड नहुने भएको छ । यद्पी अवार्डको नयाँ मिति तोक्न र व्यवस्थापनको अनुगमन गर्न नेफ्टा टोली पुस ६ गते शनिबार मलेसिया तर्फ उडेको छ । टोलीमा जुरी सदस्य सुनिल थापा, नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघका अध्यक्ष मनोज केसी, संघका उपाध्यक्ष प्रकाश महरा र सदस्य शंकर छन् ।
अध्यक्ष मनोज केसीले अवार्डको तेस्रो मिति चाँडै नै तय गरिने बताएका छन् । अवार्डको मिति सर्दै जाँदा कतै नेफ्टा अवार्ड नहुने त होइन ? भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष मनोज केसीले भने टाउकोले टेकेरै भएपनि मलेसियामा अवार्डलाई सम्पन्न गर्ने दाबी गरे।